Aoni 1080p FHD Webcam Camera With Built-in HD Microphone C33 ~ ICT.com.mm
HomeAoni 1080p FHD Webcam Camera With Built-in HD Microphone C33
Aoni 1080p FHD Webcam Camera With Built-in HD Microphone C33
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 1920 × 1080 HD resolution, clear output quality The distance between the manual and the near view can be adjusted freely.Take control of your image clarity Live broadcast platform... [Learn more]
Brand: AoniSKU: 153622N/ASee more: Aoni, Conferencing System, Deals, Products, Recent Updates, Shop, Star Universe, Under 100k, Warehouse, Web Conferencing SystemFilter by: Promotion, Warehouse, Webcams
1920 × 1080 HD resolution, clear output quality
The distance between the manual and the near view can be adjusted freely.Take control of your image clarity
Live broadcast platform anchor recommendation, video stereoscopic nature, illuminate your beauty
USB interface free drive, plug and play
Stereo base, multiple placement methods
Distance: Picking distance is4meters
ဒီ Aoni အမှတ်တံဆိပ် A31 FHD Web ကင်မရာလေးက Resolution - 1080p အထိရရှိတဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ကင်မရာတစ်လုံးပါတယ်။ Built-in ထည့်သွင်းထားတဲ့ HD မိုက်ကရိုဖုန်းက နောက်ခံဆူညံသံတွေကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် Conferencing ပြုလုပ်ချိန်မှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ စကားပြောသံကိုသာ ကြားရစေမှာပါ။ (၄)မီတာ အတွင်းရှိ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ယူနိုင်တဲ့အတွက် Meeting Room တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အထူး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကင်မရာကို ဘယ်ညာလှည့်နိုင်တဲ့အတွက် မြင်ကွင်းထောင့်အနေအထားကို မိမိစိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ Display မျက်နှာပြင်မှာ တပ်ဆင်နိုင်သလို Tripod မှာလည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Only to Light Up Your Beauty
1920 × 1080p HD resolution and clear picture quality and smooth output.
You can manually adjust the distance and focus.Image is clear to you control.Rotate left and right to adjust image sharpness.
Compatible with various live streaming platform apps.
The camera USB interface is the directly plugged into the computer.Open the computer cmaera and use.
Total price:K59,567 K35,741
This item: Aoni 1080p FHD Webcam Camera With Built-in HD Microphone C33 K47,026 K28,216